Inona no atao hoe ambivalence amin'ny psikology, filozofia ary fifandraisana?
Ambivalence - inona ary izany ary ahoana ny fomba hamahana azy io?
Tamin'ny voalohany, dia niely be ny fitsaboana. Sambany vao fantatra ny ambivalence noho ny mpitsabo Frantsay Bleuler tamin'ny taona 1900. Tamin'ny vanim-potoana, io foto-kevitra io dia nampiasaina tamin'ny teolojia psychoanalytika sy ny asan'i Sigmund Freud.
Inona ny ambivalence?
Ambivalence dia bifurcation ao am-pon'ny olona iray amin'ny fifandraisana amin'ny zavatra ary izany dia mety vokatry ny traikefa, na fifandraisana roa amin'ny lohahevitra, ho an'ny olona sy ny sisa. Fanjakana iray izay ahafahan'ireo fihetseham-po roa mifanohitra. Mba hahafahana mandalina tanteraka ny foto-pisainan'ny ambivalence dia ilaina ny mandinika izany amin'ny fomba fijery ny psikology sy ny psikatrama.
Inona no atao hoe ambivalence amin'ny psikology?
Raha tsy raharahaintsika, dia nanjary nalaza be tao amin'ny psychoanalysis ny hevitra hoe ny ambivalence no nampiasaina voalohany tany amin'ny sehatry ny fitsaboana. Amin'ny lafiny ara-psikolojika, tsy marary ny olona iray ambivalenta, satria io toetra io dia mety hisy fiantraikany tanteraka amin'ny olona iray, ny fahasamihafana dia tsy hita afa-tsy amin'ny fisehon'ny fanjakana toy izany. Amin 'ny ankapobeny, ny fahambaniana eo amin' ny psikolojia dia fahatsapana fihantsiana amin 'ny zavatra rehetra.
Sigmund Freud dia nanamafy fa ny fisehoana miharihary amin'ny maha-duality dia azo ambara amin'ny firenena tsy mitovy amin'ny an'ny firenena, izay miseho amin'ny vanim-potoana ny fivoaran'ny maha-olona. Nahoana ny psychoanaly no mandinika fatratra an'io endri-javatra io? Ny fototry ny fotony dia ao anatin'ny rafitry ny olona ambony. Misy fombafomba roa tsy azo tsapain-tanana sy fahafatesana izay efa miara-miaina ao an-tsain'ny olona hatramin'ny nanombohany azy, izay mampiseho kokoa ny ambivalence.
Mandritra izany fotoana izany, tsy azo lazaina hoe azo trandrahana na mety amin'ny antony maromaro izany tranga izany, saingy tokony ho marihina fa amin'ny fisian'ny toe-piainana manohana ny duality, ity fanjakana ity dia mety hampidi-doza kokoa ary mety hiteraka korontana nateraky ny aretina ary vokatr'izany - fiantraikany ratsy. Ireto misy antony mety:
fikasana hanova ny fahatsiarovan-tena, na hanitatra azy;
fampiasana zava-mahadomelina ara-pitsaboana, fanenjehana, fampiasana toaka;
toe-javatra mampalahelo ny psyche olombelona;
fahasarotana maro samihafa, ketraka.
Misy ihany koa dikan-teny fanta-daza iray izay mety amin'ny toe-draharaha misy fifanoherana misy toe-javatra mifanohitra amin'ny toe-javatra iray, ka mety hampihemotra ny iray hafa ao anatin'ny fiaraha-miombon'antoka ny fanjakana iray. Noho izany, tsy ny olon-drehetra no afaka mampiseho ambivalence, izay misy ao an-tsainy, izay mahatonga ny toe-javatra mampidi-doza hivoatra.
Ambivalence amin'ny filôzôfia
Ny fotokevitra momba ny duality amin'ny filôzôfia dia heverina ho sary fitaratra ao an-tsain'ireo olona izay mifanohitra amin'ny tsirairay. Ny fahamboniana ny fisian'ny ady tsy tapaka eo amin'ny tsara sy ny ratsy, amin'ny fahaterahana sy ny fahafatesana, ny fitiavana ary ny fankahalana. Isaky ny faharoa dia misy lehilahy iray fehezina fiara maro samihafa, manao safidy, fahatsapana ary mamorona iray na hafa. Ny fiainan'ny olombelona dia feno fihetseham-po sy fanapahan-kevitra marobe.
Ambivalence sy faniriana
Ambitendency dia midika ho fanitsakitsahana ny fitondrantenan'ny motera, izay manamarika ny duality eo amin'ny sehatry ny asa an-tsitrapo, ny vokatr'izany dia tsy ampy, fihetsika hafahafa. Ity fisehoan-javatra ity dia miseho amin'ny ankapobeny amin'ny olona izay maneso amin'ny aretin'ny catatonic. Izany hoe, ny dingana lavareny dia mety hitarika ho amin'ny faniriana olona iray amin'ny aretina mikraoba.
Ny antony ambivani-tena
Ny antony fototra mahatonga ny duality dia singa manokana izay miseho amin'ny olombelona.
Tsy fahafahana mandray fanapahan-kevitra. Ny safidy manoloana ny olona iray dia miseho mandritra ny fiainana, ary ny fanapahan-kevitra tsirairay dia miteraka vokatra marobe, na tsara na ratsy. Ireo olona izay miezaka ny tsy mandray fanapahan-kevitra dia miteraka fifandirana eo amin'ny sehatry ny psychoemotional ao anatiny, izay mitondra any ambivani-tena.
Ny tsy fahatokisana sy ny fahatokisan-tena amin'ny fahatahorana fahadisoana dia mety hahatonga ny ambivalence.
Ny fahaketrahana maharitra, ny adin-tsaina, ny fihetseham-po ratsy - izany rehetra izany dia mety miteraka fikorontanan-tsaina.
Ambivalence amin'ny fifandraisana
Ny olona dia zava-tsarobidy izay tsy misy fiaraha-miasa eo amin'ny eritreritra, ny fihetsika ary ny faniriana. Ny fihetseham-pon'ny olona, ​​amin'ny ankapobeny, dia tsy manana firaisana sy firaisana. Afaka mahatsapa fifamaliana roa mifanohitra amin'ny olona iray isika. Tsy milaza mivantana izy ireo hoe: "Tiako sy mankahala" - raha ny fahitako azy, ahoana no ahafahan'ny olona miaina izany amin'ny fotoana iray?
Ny toe-tsaina mitombina dia afaka hiseho amin'ny fitsapana simultaneous ny fahalemen'ny reniny ho an'ny zanany sy ny fahatsapana fahatezerana ary ny fahasosorana amin'ny reraka, ny fitiavana ny vadiny sy ny fankahalana vokatry ny fialonana. Ny duality ny fihetseham-po dia mety ho ny fomban'ny toe-javatra izay mifamahofaho ny fihetseham-po ary mitsangana vetivety, fa misy ny fahatsapana voajanahary amin'ny zavatra iray, olona na fihetsika manokana.
Ny fanandraman'ny natiora anankiroa amin'ny fiainana ara-nofo dia mety ho vokatry ny fehezan-dalàna momba ny fiainana ara-nofo, izay mety hahatonga ny fahatsapana mety hitranga amin'ny eritreritra ara-nofo. Ankoatra izany, ny fihetseham-po tafahoatra dia mety ho vokatry ny fahatsapana fahalemena sy fisainana momba ny fahadiovan'ny firaisana ara-nofo. Amin'ny fotoana iray dia mety haniry zavatra "mamy" ny olona iray, ary ny faharoa manaraka dia manome azy "peppercorn".
Ny olana dia ny fisalasalana amin'ny olona iray eo amin'ny lahy sy vavy ary ny fironana ara-pananahana. Tsy misy ahiahy azo antoka ao an-tsain'olombelona - noho ny antony maromaro, mety hivezivezy eo anelanelan'ny famaritana azy izy, ary tsy hahatsapa ny tokony ho izy. Ny fihenan'ny fitondran-tena dia mety ho vokatry ny toetran'ny firaisana ara-nofo amin'ny lahy sy ny vavy ihany koa.
Ambivalence amin'ny fifehezana
Ambivalana ambivalana dia karazana fifehezana, izay tsy ahafantaran'ny zaza ny fahatsapany ho an'ny reny, misalasala izy, avy eo manandrana manintona ny sainy, avy eo manohitra ny manosika azy. Izany fisehoan-javatra izany dia mety hipoitra vokatry ny tsy fahampian'ny fahatokisan-tena eo amin'ny reny sy ny zanany. Ny fanabeazana ny ankizy ao anatin'ny henjana, miaraka amin'ny fetra voafetra sy fetra, tsy misy ny fisehon'ny hafanana, ny fitiavana ary ny fiheverana, dia mitarika ho amin'ny duality fahatsiarovan-tena eo amin'ny zanaka eo amin'ny ray aman-dreny.
Ny vokatr'izany trangan-javatra toy izany dia mety ny mifanohitra, be fiahiana ny ray aman-dreny, miditra ao an-tsain'ny ankizy sy ny fiheverana tsy tapaka, tsy misy fameperana. Ho vokatr'izany fanabeazana izany dia mety hiseho ny ambim-bava. Amin'izany fotoana izany, amin'ny taona, ho lasa olona iray:
mamita-tena bebe kokoa;
tsy azo antoka;
ny tsy fahatokisana ny tontolo manodidina azy;
miankina amin'ny fifandraisana.
Ambivalence - ahoana no fialana?
Ambivalence - tranga iray izay matetika no miseho ao an-tsain'ny olona iray tsy hita maso ary tsy misy vokany. Na izany aza, raha miteraka fihetseham-po, fahatsapana, miteraka tsy fifankahazoana amin'ny fifandraisana amin'ny olon-kafa sy amin'ny ankapobeny eo amin'ny fiainana, dia tokony hifanaraka amin'ny manam-pahaizana manokana ianao. Ny fitsaboana ny ambivalence dia mifototra amin'ny fomba fitsaboana araka ny tokony ho izy, mifototra amin'ny toetry ny olona ary ny antony mahatonga ny fiandohan'ny duality.
Ao amin'ny fitsaboana, ny fanafody dia ny hanafoana ny toe-pahasalaman'ny psyche ary ny fampiofanana ny toe-javatra dia azo ampiasaina. Misy tranga izay mitrandraka ny aretina, mety hisy ny fandrahonana ny fiainan'ny marary sy ny hafa, avy eo dia tokony hatao amin'ny hopitaly ara-pahasalamana ny fitsaboana. Ao amin'ireo mari-pahaizana ambivalan-tena voalohany, amin'ny fisehoan'ny toe-pahasalamana iray, dia tsy tokony hizaka fanafody ny tenany, satria tsy vitan'ny hoe tsy mamokatra vokatra tsara fotsiny izany, fa mampitombo ihany koa ny toe-javatra.
Raha jerena fa ny ambivohitra dia endriky ny toetra ara-psikolojian'ny olona, ​​dia ilaina ny manara-maso ny psyche, mandinika ny fiovana rehetra. Raha manomboka mitsidika ireo hevitra maneso ianao izay tsy afaka miala amin'ny anao irery, dia mila mitady fanampiana avy amin'ny dokotera ianao. Izany dia ahafahana mamantatra ny aretina amin'ny ambaratonga voalohany, izay hanamora ny fitsaboana manaraka.
Ahoana ny amin'ny fifanakalozan-kevitra?
Ahoana ny fomba hanovana ilay feo eo amin'ny fiainana?
Fanehoam-bahoaka - fomba fanodinkodinam-bahoaka sy ny fahatsiarovan-tena
Inona no atao hoe avonavona - famantarana sy fomba hiatrehana izany?
Tahotra ny teny lava
Ny fahamendrehan'ny olombelona
Louis Tomlinson dia nanohy ny fifandraisany tamin'i Eleanor Calder taorian'ny roa taona niakarana
Aretina amin'ny Giringsprung amin'ny ankizy
Ny totozy totozy ao anaty saosy mofomamy anaty zezika mangotraka
Famaritana "Dibibi Dibebe"
Salady misy kesika sy kesika
Fitsaboana trombocyte amin'ny ankizy
Yoghurt ho an'ny mofomamy
Ny fanafody ho an'ny olona iray
Kitapo misy vera
Fitoeran-jiro ao an-trano
Herring amin'ny fomba ofisialy koreana - resipe
Inona no sakafo fihenam-bidy?
Aiza no misy proteinina be?
Mamboly tavoahangy amin'ny lohataona
Ny vaksiny amin'ny tetanosy - ny fiantraikany eo amin'ny olon-dehibe